Retail Admin, Author at Retail Master Group Web Site
There’s much more to learn about Bitcoin and associated technologies. You must also have high speed computers to let you solve as many problems as possible. The comparison chart above is onlyafast reference. You’re able to earn bitcoin online forafreelancer. With all these graphics cards, something will inevitably fail. It is very important to keep the wallet safe from the possible threats with two-factor authentication practice. Continue reading →
Certificate in Strategic Retail Management သင်တန်း မန္တလေးမြို့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း။
Published September 29, 2017 | By Retail Admin
လက်လီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်များစွာကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဦးဆုံးဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိသော Retail Master Retail School မှ မန္တလေးမြို့ရှိလက်လီလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်လက်လီဘာသာရပ်များကိုစိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရက်တိုသင်တန်းကိုအောက်ပါအစီအစဉ်များအတိုင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
Certificate in Strategic Retail Management (ပါဝင်သည့်သင်ကြားမှုခေါင်းစဉ်ငယ်များကို တရားဝင် www.retailmastergroup.com တွင်လည်းလေ့လာကြည့်ရူနိုင်ပါသည်။)
ဆရာ ဦးအေးမိုးကျော် @ Retail Master
Retail Master Retail School www.retailmastergroup.com
သင်ကြားမည့်နေ့ရက် နှင့် အချိန်
၂၈ စက်တင်ဘာလ မှ ၂၉ စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၇ ခုနှစ်
(နံနက် ၉:၀၀ မှ ညနေ ၅:၀၀ အထိ)
သင်တန်းကြေး – ၁သိန်းကျပ်တိတိ (Student Kit ပါဝင်ပြီး)
Japan Center (Mandalay)
Block-1, Unit-6, Mingalar Mandala
မြန်မာနိုင်ငံပထမဦးဆုံး နှင့် တစ်ခုတည်းသော လက်လီလုပ်ငန်း (Retailing Industry) ဆိုင်ရာ သင်တန်းကျောင်း
Retail Master Retail School သည် လက်လီလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များ နှင့် လုပ်ငန်းခွင် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များကို အထူးပြု သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးနေသည့် သင်တန်းကျောင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၆ခုနှစ် မတ်လ (၁၂)ရက်နေ့မှစတင်၍ သင်တန်းအပတ်စဉ် အမှတ်(၄) အဖြစ် အောက်ဖော်ပြပါ ဘာသာရပ်များကိုသတ်မှတ်တန်းခွဲအချိန်ဇယားများ အတိုင်း ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၅-ရက် ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်မည့်အောက်ဖော်ပြပါဘာသာရပ်တန်းခွဲများအတွက် သင်တန်းသားစတင်လက်ခံပေးနေပြီဖြစ်ပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသည်။
သင်တန်းချိန် – နံနက် ၉:၀၀ မှ နေ့လည် ၁:၀၀ အထိ
သင်ကြားချိန် – စုစုပေါင်း ၂၄-နာရီ + လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင့်လေ့လာရေးခရီးစဉ်အပါအဝင်
သင်တန်းချိန် – နေ့လည် ၂:၀၀ မှ ညနေ ၆:၀၀ အထိ
• သင်တန်းကြေး – ၈ သောင်းကျပ် (သင်တန်းအင်္ကျီ၊သင်တန်းဆင်းအောင်လက်မှတ်၊ သင်ထောက်ကူစာရွက်စာတမ်း Student Kit နှင့် Coffee Time ပါဝင်ပြီးအပြီးအစီး)
• သင်တန်းရက် – အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း
• သင်တန်းအပ်နှံမှုဖောင်ပိတ်ရက် – ၄ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၇ခုနှစ် စနေနေ့
စာတွေ့လေ့လာသင်ကြားမှု – ၄၅%
လက်တွေလေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်မှု – ၃၀%
အုပ်စုဖွဲ့စဉ်းစားညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်မှု – ၂၅%
လက်လီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံခန့်ခွဲလုပ်ဆောင်မှုများကို လက်တွေ့ကျစွာလေ့လာလိုသူများအတွက်
အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့၊ အင်္ဂါနေ့နှင့်ဗုဒွဟူးနေ့တိုင်း ညနေ ၆-နာရီ မှ ည ၈-နာရီ အထိ သင်ကြားမှုနာရီပေါင်း (၂၀-နာရီ)
အပတ်စဉ် စနေနှင့်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ညနေ ၆-နာရီ မှ ည ၈-နာရီ အထိ သင်ကြားမှုနာရီပေါင်း (၂၀-နာရီ)
အပတ်စဉ် စနေနှင့်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ညနေ ၃-နာရီ မှ ညနေ ၅-နာရီ အထိသင်ကြားမှုနာရီပေါင်း (၂၀-နာရီ)
စနစ်ကျသော ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာရုံးတွင်းစီမံခန့်ခွဲလုပ်ဆောင်မှုများကို လက်တွေ့ကျစွာလေ့လာလိုသူများအတွက်
အပတ်စဉ် စနေနှင့်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း နံနက် ၁၀-နာရီ မှ နေ့လည် ၁၂-နာရီ အထိသင်ကြားမှုနာရီပေါင်း (၂၀-နာရီ)
ပထမဦးဆုံးအပ်နှံသည့် သင်တန်းသား(၁၀-ဦး) အတွက် ၁၀%သက်သာခွင့်
ဘာသာရပ်များအားလုံးကို နိုင်ငံတကာသင်ရိုးညွန်းတမ်းများကို အခြေခံ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများ၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းအဖြေ ရှာလေ့ကျင့်မှုများ၊ တင်ဆက်ပြောဆိုလေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်မှုများ၊ နည်းဗျူဟာဆိုင်ရာကစားနည်းများ ကစားခြင်းများ စသည့် လုပ်ငန်းခွင် တွင် ပြန်လည်အသုံးချနိုင်စေရန် သင်တန်းသားဗဟိုပြုသင်ကြားမှုနည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ ဆရာ Retail Master ကိုယ်တိုင် သင်ကြား လေ့ကျင့် ဆွေးနွေးပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
Published September 28, 2017 | By Retail Admin
Retail Master Retail School သင်တန်းကျောင်း ၏ သင်တန်းအပတ်စဉ် အမှတ်(၅) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ မေလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် အသစ်ထပ်မံဖွင့်လှစ်ပါမည်။
စသည့်ဘာသာရပ်များ ကို နိုင်ငံတကာသင်ရိုးညွန်းများနှင့်အညီ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများ ၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးညှိုနှိုင်းအဖြေရှာ လေ့ကျင့်မှုများ ၊ တင်ဆက်ပြောဆိုလေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်မှုများဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းသားဗဟိုပြုသင်ကြားမှု နည်းစနစ်များဖြင့်သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
ပထမဦးဆုံး အပ်နှံသည့် သင်တန်းသား (၁၀ဦး) 10%(Off)
၅ဦးနှင့် အထက်အပ်နှံသည့် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် 15%(Off)
Retail Master Retail School သည် လက်လီလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များ နှင့် လုပ်ငန်းခွင် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များ ကို အထူးပြုသင်ကြားပေးနေသည့် အလုပ်အကိုင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ သီးသန့်သင်တန်းကျောင်း (Vocational Training School) ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၄)ရက်နေ့မှစတင်၍ သင်တန်းအပတ်စဉ် အမှတ်(၄) အဖြစ် အောက်ဖော်ပြပါ ဘာသာရပ်များကို သတ်မှတ်တန်းခွဲအချိန်ဇယားများအတိုင်း ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လက်လီလုပ်ငန်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်များ သင်တန်းကြေး (၇၀၀၀၀-ကျပ်)
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စွန့်ဦးတီထွင်မှုများနှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်လိုသူများအတွက်
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်လက်လီရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များကို ထိရောက်စွာဖော်ဆောင်လိုသူများအတွက်
အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့ နှင့်ဗုဒွဟူးနေ့တိုင်း ညနေ ၆-နာရီ မှ ည ၈-နာရီ အထိ
အရောင်းနှင့်ဖြန့် ချီရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်အစီအမံများရေးဆွဲ၍ စနစ်ကျသော အရောင်းအဖွဲ့အစည်းစနစ်ဖော်ဆောင်လိုသူများအတွက်
အပတ်စဉ် ကြာသပတေးနေ့နှင့်သောကြာနေ့တိုင်း ညနေ ၆-နာရီ မှ ည ၈-နာရီ အထိ
ဘာသာရပ်များအားလုံးကို နိုင်ငံတကာသင်ရိုးညွန်းတမ်းများကို အခြေခံ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများ၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း အဖြေရှာလေ့ကျင့်မှုများ၊ တင်ဆက်ပြောဆိုလေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်မှုများ၊ နည်းဗျူဟာဆိုင်ရာကစားနည်းများ ကစားခြင်းများ စသည့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပြန်လည်အသုံးချနိုင်စေရန် သင်တန်းသင်ဗဟိုပြုသင်ကြားမှုနည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ သင်ကြားလေ့ကျင့်ဆွေးနွေး ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ခုနှစ် မတ်လ(၇)ရက်နေ့မှစတင်၍ အောက်ဖော်ပြပါဘာသာရပ်များကို သတ်မှတ်တန်းခွဲအချိန်ဇယားများအတိုင်းထပ်မံဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(က) စတိုးဆိုင်များ၊ မတ်ခ်များ၊ စင်တာများ စသည့် လက်လီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီမံခန့် ခွဲမှုများကို လက်တွေ့ကျစွာလေ့လာလိုသူများအတွက်
သင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက် – ၇ မတ်လ ၂၀၁၅ခုနှစ်
သင်တန်းကာလ – (၃)လ
သင်တန်းကြေး – ၅၀၀၀၀ ကျပ် (Complementary of Student Kit)
(ခ) လက်လီလုပ်ငန်းများတွင် မရှိမဖြစ်သော ဈေးဝယ်သူဝန်ဆောင်မှုနှင့် ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများကို ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်လိုသူများအတွက်
သင်တန်းကြေး – ၇၀၀၀၀ ကျပ် (Complementary of Student Kit)
အထက်ပါအမှတ်စဉ် (က) မှ (ဃ) အထိ ဘာသာရပ် (၄)မျိုးစလုံးအား တပြိုင်တည်းတက်ရောက်ပြီး သင်တန်းပြီးဆုံးအောင်မြင်သူများသည် Retail Business Management Group Certificate (၁-ခု) နှင့်တကွ ဘာသာရပ် (၄-မျိုး)အတွက် Certificate (၄-ခု) အပါအဝင် စုစုပေါင်း (၅-ခု) ကို (အထူး) သက်သာသောသင်တန်းကြေး (စုစုပေါင်း-၁၂၀၀၀၀-ကျပ်) ဖြင့် တပြိုင်တည်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက် – ၈ မတ်လ ၂၀၁၅ခုနှစ်
(ခ) အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းများတွင် စည်းစနစ်ကျသောဈေးကွက်ထိုးဖောက်မြှင့်တင်မှုနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုလေ့လာလိုသူများအတွက်
(ဂ) ဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်းများတွင် အရေးပါဆုံးသော ရောင်းချခြင်းနှင့်ဖြန့်ချီရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်အစီအမံများ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်လိုသူများအတွက်
ဘာသာရပ်များအားလုံးကို နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများတွင် လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ လုပ်သက်အတွေ့အကြုံရှိသော ဆရာများမှ နိုင်ငံတကာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကိုအခြေခံ၍ လက်တွေ့လေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်မှုများ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းအဖြေရှာမှုများတင်ဆက်ပြော ဆိုလေ့ကျင့်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာကစားနည်းများ စသည့် သင်တန်းသားဗဟိုပြု သင်ကြားလေ့ကျင့်မှုနည်းစနစ်ပုံစံများကို အသုံးပြု၍ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ သင်ကြားပြသပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အရောင်းမြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ မွေးထုတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုအစီအစဉ်များ (PG Development Programme)
ဖြန့်ချီရေးကုမ္ပဏီများနှင့် ကွန်ပြူတာ/မိုဘိုင်းဖုန်းနည်းပညာကုမ္ပဏီများအတွက် ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ (Promotion Girl, Product/Brand Consultant, Customer Service Advisor) စသည့် အရောင်းမြှင့်တင်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အထူးဝန်ထမ်းကောင်းများ မွေးထုတ်လေ့ကျင့်ပေးခြင်း (PG Skills Developments Programme) များကိုလည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
လုပ်ငန်းခွင်အရောက် အထူးရက်တိုသင်တန်းများ(Corporate Training) နှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ(Workshop)
ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်အရောက် အထူးရက်တိုသင်တန်းများ(Corporate Training) နှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ(Workshop) များကိုလည်း ဘာသာရပ်အမျိုးအစားအလိုက် သီးသန့်စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
လက်လီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များ နှင့် လုပ်ငန်းခွင် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်သင်တန်းများ (2015)
Retail Master Retail School သည် လက်လီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များ နှင့် လုပ်ငန်းခွင် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များကို Certificate မှ Diploma အဆင့်ထိ အထူးပြု သင်ကြားပေးနေသည့် သီးသန့်သင်တန်းကျောင်း ဖြစ်သည်၊ ၂၀၁၅ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ(၁၅)ရက်နေ့မှ စတင် အောက်ဖော်ပြပါ ဘာသာရပ်များကို သတ်မှတ်တန်းခွဲ အချိန်ဇယားများအတိုင်း ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်၊